आशिष्मा भन्छिन्- नायिकाको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ लाख हुनुपर्छ - Khula Patra
आशिष्मा भन्छिन्- नायिकाको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ लाख हुनुपर्छ
प्रकाशित समय: १३:०५:०२
आशिष्मा नकर्मीले पाँच वर्षको अन्तरालमा एक दर्जन फिल्ममा अभिनय गरिसकिन्। त्यसमध्ये अहिलेसम्म आठ वटा रिलिज भइसक्दा उनी बल्ल सोलो हिरोइनको रुपमा देखिँदै छिन्।
कात्तिक २४ गते रिलिजको तयारीमा रहेको ‘मेला’ फिल्मबाट उनी पहिलो पटक सोलो हिरोइन बन्न लागेकी हुन्।
पाँच वर्षको पर्खाइबाट ‘पूर्ण नायिका’को रुपमा छलाङ मार्दै गर्दा आशिष्मा नेपाली फिल्मक्षेत्रमा नायिकाको दुर्दशा देखेर निकै असन्तुष्ट रहिछन्। न सोचेजस्तो भूमिका पाइन्छ, न त पारिश्रमिक नै!
उनी पर्दामा थरीथरीका रोल गर्न रुचाउँछिन्, त्यसमा पनि नारीप्रधान फिल्म गर्न उनको चाह छ। तर, दशकौंदेखि हिरोकै वरिपरि घुम्ने नेपाली हिरोइनको भूमिका नफेरिँदा उनी दिक्क छिन्।
‘अभिनेत्रीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नेपालमा फिल्म लगभग लेखिँदैन भने पनि हुन्छ’, आशिष्मा लेखाजोखा गर्छिन्, ‘यस्तो अवस्थामा एउटी अभिनेत्रीले आफूलाई परीक्षण र चुनौती दिन पाइरहेकी छैनन्।’
अभिनेत्रीलाई स्क्रिन स्पेस सानो हुँदा खुलेर आफूलाई गतिलो रुपमा पोख्ने ठाउँ नै उनी देख्दिनन् । त्योसँगै फिल्मक्षेत्रको अर्को रोग पनि उनी औंल्याउँछिन्, ‘यहाँ जुन शैलीको भूमिकामा डेब्यू गरियो, त्यस्तै खाले भूमिकामा धेरै प्रस्ताव आउँछन्।’
त्यसरी दोहोरिएर आउने भूमिकाका थुप्रै प्रस्तावलाई उनलाई नकारेकी छिन्। किनकि उनी फरक शैलीको चरित्रमा देखिएर दर्शकमा छाप छाड्न चाहन्छिन्।
उनी भन्छिन्, ‘मलाई दर्शकका लागि ‘रोल मोडल’ हुने खालको भूमिका गर्न मन छ।’
महिलालाई केन्द्रीय भूमिकामा राखेर फिल्म बनाउने प्रचलन विश्वभरि नै पातलो भए पनि उनी नेपालको तुलनामा अन्यत्र राम्रो अवस्था देख्छिन्। यहाँ पनि नारीप्रधान फिल्म बन्ने क्रम बढ्ला भन्ने आशा चाहिँ उनमा जीवितै छ।
बाहिरबाट चमकदमक हेर्दा रंगीन संसारभित्र केही कमी नै नहोला, त्यहाँभित्रका कसैको केही गुनासो नै नरहला जस्तो लाग्न सक्छ। तर, अन्य क्षेत्र जस्तै फिल्मक्षेत्रमा पनि हैरानी र समस्याका खात छन्। त्यसमा छुटाउनै नहुने पाटो हो, पारिश्रमिक। यसमा महिला कलाकार झन् पीडित छन्। आशिष्मालाई पनि नायिकाले पाउने पारिश्रमिक देखेर टीठ लाग्छ। उनी नेपाली नायिकाहरुले पाउने पारिश्रमिक हुनुपर्ने जति भए जस्तो लाग्दैन।
‘हुन त आफ्नो पारिश्रमिक आफैंले तोक्ने हो, त्यसमा बार्गेनिङ गर्न ठाउँ त छँदैछ। तर, हामीले पाउँदै आएको पारिश्रमिक आकर्षक छैन’, उनले भनिन्।
उनले महिलाले कम पारिश्रमिक पाउने समस्या फिल्म जस्तै हरेक क्षेत्रमा देखेकी छिन्। यो सबै समाजको पितृसत्तात्मक संरचनाका कारण भएको उनको ठम्याइ छ।
उनको विचारमा आजको समयमा नेपाली नायिकाको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ लाख रूपैयाँ हुनुपर्छ।
अहिले पाइरहेको पारिश्रमिकले नायिकालाई मेन्टेन गर्नै नपुग्ने आशिष्माको अनुभव छ। ‘फिल्मको कमाइले मात्र पुग्दैन। म्युजिक भिडियो, देश-विदेशमा हुने सांस्कृतिक कार्यक्रम र विज्ञापनबाट हामीले आफूलाई मेन्टेन गरिरहेका छौं’, उनले रंगीन संसारभित्रको दुःख कहिन्।
एकातिर नायिकाहरु पारिश्रमिक कम पाउँछन्, अर्कातिर यिनीहरु आफूलाई मेन्टेन गर्नै जान्दैनन् भनेर आलोचना पनि सुन्नुपर्छ।
विदेशका सेलिब्रिटीहरुको लोभलाग्दो जीवन हेर्दै मन चुकचुक बनाउनुपर्ने अवस्थामा यहाँका कलाकारहरु छन्। विदेशी सेलिब्रिटीहरुको अगाडि नेपाली कलाकारलाई हेरेर दर्शकले ‘लाइफस्टाइल’ होस् त यस्तो भन्ने अवस्था नरहेको आशिष्माको स्वीकारोक्ति छ। यस्तो अवस्थामा नेपाली कलाकारहरुलाई के कुराले खुसी दिन्छ त ? कसरी उनीहरु यो क्षेत्रमा टिकिरहेका छन्?
मोफसल र विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले कलाकारलाई दिने सम्मानले सबैभन्दा खुसी दिलाउने गरेको उनको अनुभूति छ।
‘मोफसलमा हामीलाई निकै सम्मान गर्नुहुन्छ, तर काठमाडौंमा भने त्यस्तो इज्जत र सम्मान हामीलाई छैन’, उनले भनिन्।
म्युजिक भिडियो खेल्दै गर्दा आशिष्माले ‘अन्तराल’ फिल्मबाट डेब्यू गरेकी थिइन्। त्यसबेला उनलाई आशलाग्दी अभिनेत्रीका रूपमा हेरिएको थियो। आजसम्म आइपुग्दा उनी आफ्नो पाँचवर्षे फिल्मी करिअरलाई एकसरो मूल्यांकन गर्ने भइसकेकी छिन्।
करिअरको नापजोखमा उनी आफूलाई सन्तुष्टि र असन्तुष्टिको मझधारमा पाउँछिन्।
‘मसँगै आएका कतिपय अभिनेत्री हराइसके, त्यो हेर्दा म त निरन्तर काम गरिरहेको छु भनेर खुसी लाग्छ’, उनले दुवै पल्ला जोखिन्, ‘अर्कातिर, एक-दुई वटा फिल्मबाटै आफूलाई स्थापित गरेका नवअभिनेत्रीलाई देख्दा भने नमज्जा लाग्छ।’
यस्तो मज्जा र नमज्जा चाखिरहेकी आशिष्मा फिल्मक्षेत्रमै जम्न विदेशको बसाइ छाडेर नेपाल हान्निएकी थिइन्। साढे पाँच वर्ष लामो अमेरिका बसाइ टुंग्याएर आएपछि म्युजिक भिडियोबाट यात्रा सुरु गरिन्।
आशिष्मालाई सानैदेखि अभिनयको दुनियाँमा रमाउने रहर थियो। तर, यसमा पहिलो पाइला हाल्न भने उनले घरभित्र निकै पापड बेल्नुपर्‍यो।
उनी सम्झन्छिन्, ‘बुवासँग रोएर मनाउँदै म्युजिक भिडियो खेल्न पाएकी थिएँ।’
छोरी त फिल्मक्षेत्रतिर पछि मोहित भइन्, त्योभन्दा अगाडि उनकी आमा आशा आफ्नो जमानामा अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरको फ्यान थिइन्। जेठी छोरी जन्मेपछि उनले आफ्नो नाममा आफ्नी प्रिय नायिकाको नाम मिसाउँदै राखिदिइन्, आशिष्मा। नभन्दै छोरी करिश्माकै पदचाप पछ्याउँदै यही क्षेत्रमा डोरिइन्।
मोडलिङबाट यात्रा सुरु भए पनि समय क्रममा उनी नेवारी फिल्मकी स्थापित नायिका बनिन्। अहिले उनी नेवारी फिल्मकी निर्मात्री समेत बनिसकेकी छिन्।
अब हेर्नु छ, नायिकालाई पोषिलो पारिश्रमिकको वकालत गर्ने आशिष्माले आफू निर्माता भएपछि कलाकारहरुलाई चित्त बुझाउन सक्लिन्?